Burma National News - Uprisings
Uprisings	WHAT IS 10 TACTICS?
10 Tactics provides original and artful ways for rights advocates to capture attention and communicateacause. It includesa50-minute film documenting stories from around the world andaset of cards; with tools, tips and advice, for you to work through as you plan your own info-activism. The film has now been translated by volunteers into more than 25 languages and it has been shown at over 200 screenings in over 60 countries. If you would like to screen 10 Tactics or use it as part ofaworkshop get in touch.
နည်းဗျူဟာ ၁၀ ချက်ဆုိုတာ ဘာလဲ။
နည်းဗျူဟာ ၁၀ ချက် ဆိုတာ အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲအကျိုးဆောင်တွေကို အာရုံဖမ်းစားဖို့နဲ့ အကြောင်းကိစ္စတခုခုနဲ့ ဆက်စပ်ရေးမှာ ပင်ကိုအတိုင်း အနုပညာဆန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ သူ့မှာ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း ဖြစ်ရပ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မိနစ်၅၀စာ မှတ်တမ်းကားတခုနဲ့အတူ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ လှုပ်ရှားစီစဉ်နုိုင်မယ့် Tool တွေ၊ မှတ်ချက်တွေနဲ့ အကြံပေးချက်တွေပါတဲ့ ကဒ်အတွဲတခုလည်း ပါပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ အခုအချိန်မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ကူညီမှုနဲ့ ဘာသာ ၂၀ ထက်မနည်း ပြန်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါ့ပြင် ၄၅ နုိုင်ငံမှာ အကြိမ်၁၀၀ လောက်ပြပြီးပါပြီ။ နည်းဗျူဟာ ၁၀ ချက်ကို ကြည့်ချင်ရင် (သုို့) ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ သုံးချင်ရင် ဆက်သွယ်ပါ။ http://www.informationactivism.org/my/
1962 Rangoon University Students Uprising1974 U Thant Uprising1988 Uprising2007 Saffron Revolution2012 Letpadaung Copper Mine ProtestThe Coming Revolution	Copyright © 2011 Burma National NewsInformation is Power